Yakapetwa mativi tepi, furo mbiri mativi tepi, sei kubvisa maratidziro emhando dzese dzetivi-mbiri mativi tepi? |
Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, isu tinowanzoshandisa tepi, uye munzvimbo dzakasiyana, mhando yetepi inoshandiswa yakasiyana zvakare. Kunyangwe iyo tepi iri nyore kushandisa, pane dambudziko rakajairika, ndokuti, zvakaoma kwazvo kubvisa zvisaririra zvakasara netepi mushure mekushandisa. Vanhu vazhinji vanosarudza kushandisa tauro nyoro, asi nzira iyi haigone kubvisa zvachose zvisaririra zve tepi. Kune nzvimbo dzinotya kunyorova, iyi nzira haina kukodzera. Muchokwadi, isu hatidi kushandisa simba rakawanda kushambidza zvisaririra zvine tema. Tinogona kugadzirisa dambudziko nenzira kwayo kuburikidza nedzimwe nzira dzakangwara. Mushure mekuverenga zvinotevera zvirimo, isu tinonzwisisa.
Kaviri mativi tepi
Maitiro ekubvisa maviri-mativi ekunamatira tepi zvakare irwo rudzi rwechinhu chinowanzo shandiswa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, nekuti haigone kuratidza maratidziro kana uchiishandisa, kunyanya mune dzimwe hofisi nzvimbo dzakakomberedzwa, inowanzoonekwa. Kana iwe uchida kubvisa iwo maviri-mativi ekunamatira tepi, chekutanga pane zvese, usabvarura iro riya pepa, wobva warifuridza neyakaomesa bvudzi. Hazvizotora nguva refu usati wagona kuiburutsa. Kana zvichinzi yakasiya mucherechedzo mutema, panguva ino unogona kushandisa mafuta emaruva machena kumba kupenda pairi, wozoshandisa jira kupukuta zvinyoro nyoro, wozoichenesa nemvura zvakare. Ehezve, nzira iyi inoitirwa izvo zvinhu zvisina mvura. Kana mucherechedzo mutema panzvimbo yakashandiswa hauna kunyanya kukura, tinogona kushandisa eraser kuupukuta. Kana nzvimbo yacho yakati kurei, tinokwanisa kushandisa doro risina mvura, rinova iro ratinoti indasitiri doro, panzvimbo yematavi, tobva taipukuta nejira.
Mhinduro kuchinetso cheakajeka glue mamaki ndeyekuti kune iyo nzvimbo uko banga racho risina kunyanya kukura, unogona kusarudza eraser kudzima iwo mamaki. Panguva imwecheteyo, unogona zvakare kusarudza kushandisa tauro nyoro. Inofungidzirwa kuti iyi nzira inogona kuve yekutanga kufunga kana iwe ukaona iyi mhando yekupisa chiratidzo. Fukidza tauro nyoro panzvimbo yakatarwa, wozoipukuta mushure mekuteedzera kwetepi yekunamatira zvishoma nezvishoma. Ehezve, isu takataura zvakare kuti ndiyo nzvimbo isingatyi kunamira kunyorova. Doro rinogona zvakare kugadzirisa dambudziko rema cellophane, asi tisati tashandisa nzira iyi, tinofanira kutanga taona kuti nzvimbo yekuzorwa haityi kupera. Simuka wakachena, usanamatira imwe doro pairi, uye wozononoka uye nekudzokorora kupukuta nzvimbo yacho neglue mark kusvikira yapukutwa. Detergent inogona zvakare kubvisa zvisaririra zveglue, uye nhanho uye nzira dzinoshandiswa zvakafanana nepamusoro. Yese yekugezesa nzara mvura ine zvimwe zvemakemikari zvinoriumba, saka kuishandisa kubvisa aya matanho, mhedzisiro yacho yakanakawo.
Iwo maviri-mativi ekunamatira mamaki pamadziro anogona kucheneswa kutanga nekushandisa nzara polish polish. Kutanga, nekuti mvura yakajeka inogona kubvisa iyo yekutanga vara remadziro, zvinokurudzirwa kuti iwe unofanirwa kushandisa nzira iyi munzvimbo idzo dzisiri pachena. Kana nzvimbo yacho yakakura, uye ichinyatso kuoneka, haina kukurudzirwa. Panguva imwecheteyo, iwe unogona zvakare kushandisa nzira yekupisa kuti unyorore iwo mativi-maviri ekunamatira tepi. Semuenzaniso, unogona kuifuridza neyekuomesa bvudzi, uyezve unogona kuibvisa nyore kana yapfava. Panguva imwecheteyo, isu takashandisawo jira rakaoma nevhiniga kuti tifukidze mativi-maviri ekunamatira. Zvisinei, tinofanira kuyeuchidza munhu wese kuti vhiniga yakashandiswa inofanira kunge iri chena vhiniga. Hatifanire kushandisa vhiniga tsvuku ine mavara, nekuti madziro mazhinji mumba medu akachena. Kana tikashandisa tsvuku, zviri nyore kwazvo kusiya zvisaririra pamadziro.
Kana iyo furo yakapetwa kaviri mativi yakabviswa pamadziro, unogona kusarudza chakarodzwa uye kukwenya kona diki, wozoidhonza pasi neruoko. Iri kunetesa nzira iyi, asi haizosiire chero trace. Kana ikashandiswa mupurasitiki, unogona kutanga kunyudza tauro pamvura inopisa, uifukidze pane furo rakanamatira pamativi maviri kusvikira yanyoroveswa, uyezve uwane kona diki, wozononoka kubvisa. Kana iwe ukainamatira pagirazi, unogona kuedza kushandisa sipo, kuiisa pahafu jira nyoro uye woipukuta nekudzoka kakawanda. Kana iri mucherechedzo wakaomarara, unofanira kutanga wainyudza, wozoipukuta nesipo.
Paunoona mamwe maratidziro etepi yekunamatira, usashandise banga kurikwenya. Izvo zvinongokuvadza chinhu chekutanga. Uchishandisa nzira dziri pamusoro dzakapfava, iwe unogona zvakare kuzadzisa yekuchenesa mhedzisiro, uye chakakosha chinhu kusakanganisa zvinhu zviri pasi peglue mucherechedzo.
Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi, Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana, Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana, Tepi, Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora,